Ogaden News Agency (ONA) – Gudoodo oo ka tirsan degmada Mina ayaa xalay cagta la mariyay
Gudoodo oo ka tirsan degmada Mina ayaa xalay cagta la mariyay
Posted by ONA Admin	/ June 6, 2011
Meel degmada Mina duleedkeeda ku taal oo Guduudo la yidhaado ayay xalay CWXO dharbaaxo kulul ugu gaysteen ciidamdii gumaysiga ee halkaa fadhiyay waxayna cagta mariyeen ciidankii Guduudo ku sugnaa. Waxay CWXO goobtaa kula wareegeen qalab ciidan oo kala duwan iyadoo wararka hordhaca ah ay sheegayaan in askar badan cadawga lagaga laayay. Tirada rasmiga ah faafaahinta dambe ayaan ku soo bandhigi doonaa.
Degmada Mina ayaa waxay ku taalaa Koofur Galbeed magalaada Herer oo aan wax badan ka durugsanayn magaalada, waxaana lagu hayaa magaalada Herer culays ciidan oo cadawgu uu ka argagaxsanhay.
Dhanka kale 1dii bishan Juun waxaa mar labaad isku laayay magaalada Qabridahare maleesiyadii Hawaarinta iyo Woyaanahii magaalada wada daganaa iyagoo askar dhowr iyo toban dhan oo labada dhinac ah iska dilay. Wararka ka imanaya Qabdidahare ayaa waxay sheegayaan guud ahaan inay colaad xun iyo khilaaf kala fogaansho ah ku keentay arintaa, taasoo kordhisay baxsashadii Hawaarinta dhaqanka xun, gaar ahaan kuwa diidan in aad loo sii duleysto, iyadoo ciidanka rasmiga ah ee Itobiya ay ula dhaqmaan Hawaarinta sidii calooshood u shaqaystayaal aan lahayn mabda’a iyo akhlaaq toona.
Waxaa 3dii bisha ka baxsaday Magaalda Dhanaan 14 askar Woyane iyo Hawaarin ba isugu jiray ku waas oo u soo galay CWXO Qaybta Bir-jeex. Sida oo kale waxaa ka socda goobo badan oo cadawgu ku sugnaan baxsi tirooyin kala duwan ah.
Waxaa iyadana warar la hubo ay sheegayaan in hubka laga dhigay askar cadaw oo boqolaal ah kadib dagaalkii Galaashe, kuwaasoo hadda ku sugnaa saldhigyada cadawga ee jiida u dhaxaysa Herer iyo Jigjiga, waxaana ciidankaa lagu kala xidhay xeryaha Jigjiga iyo Herer. Askataas ayaa amarka diiday ka dib dharbaaxadii loo bixiyay Aare-shacab ee Galaalshe kaga dhacday.
Waxaa muuqata in Hawaarintii shacabka lagu gumaadi jiray ay hadda soo afjar mayaan, ka dib markii ay dhibaatooyin badan kala kulmeen dagaaladii ay la galeen CWXO isla marahaantaana ay qaarkood fahmeen dulmiga ay ku sameeyeen dadka shacabka ah ee la dhashay oo aduun iyo aakhriba ay ku seegeen.